श्रीपेच लुट्न खोज्ने खेमबहादुरलाई ट्रोल गर्दै भन्न थालियो राजा! - Dainik Online Dainik Online
प्रकाशित मिति : ९ आश्विन २०७८, शनिबार १२ : १०
उनलाई नियन्त्रणमा लिई प्रहरीकहाँ अनुसन्धानका लागि बुझाइएको छ। काठमाडौं प्रहरी प्रमुख तथा प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक अशोक सिंह भन्छन्,‘प्रारम्भिक बयानमा घर्तीले राजा बन्न मन लागेर श्रीपेच उठाउन खोजेको प्रतिक्रिया दिएका छन्।’ प्रारम्भिक अनुसन्धानमा उनको मानसिक अवस्था ठिक नभएको हुनसक्ने प्रहरीको भनाई छ।
यो घटनासँगै खेमबहादुर घर्ती शुक्रबारयता रातारात चर्चामा आएका छन्। घर्तीले श्रीपेच लगाएपछि राजा बनिन्छ भन्ने लागेर आफूले राजा बन्नकै लागि श्रीपेच लगाउन खोजेको बयान दिएका थिए र उनले राजा बनेर शासन चलाउन श्रीपेच निकाल्न खोजेको बताएका थिए।
हाल यही बयानका कारण उनी सामाजिक संजालमा ट्रोलको शिकार बनेका छन्। उनको टाउकोमा श्रीपेच लागएर उनलाई सामाजिक संजालमा राजा भन्ने ट्रेन्ड नै चलेको छ।
आफ्नो बाछो जोगाउन माउ हात्तीले गोहीलाई आक्रमण गरेपछि…(भिडिओ)
अमेरिकामा सुँगुरको मिर्गौला मानिसमा सफलतापूर्वक प्रत्यारोपण!
पाकिस्तानमा यी महिलाले एकैपटक सात सन्तानलाई जन्म दिइन्